Namuhla ake sixoxe ngokuthi ubani lo Fart ubudala. Yiqiniso, izwi vogue namuhla. Ngakho sikubiza abantu abaziphatha ngendlela ethile. ukwakhiwa Mist inyamalale lapho thina uqhubekele ukuhlaziywa.
"Fart Old" - leli gama slozhnosokraschennoe, njengokuthi "ikhanda udokotela". Uma efakwe ngokugcwele, khona-ke, sorry, uthole ibinzana - "i-Fart ubudala." Ngokuvamile, okuthiwa abadala elimazayo. Kodwa ngaso sonke isikhathi. Ngokwesibonelo, njengoba kungaba Ubuyise asebekhulile, okuyinto, ngokubona abanye, futhi ezisebenzayo umqondo yezenhlalakahle noma ngokobulili. Ubani lo Fart ubudala? Ingabe elilodwa ongafuni ukuba bavumelanise ukuphila kwabo emibonweni okuthiwa umphakathi zokuguga. Ngokwesibonelo, umuntu eneminyaka engu yokushada intombi enhle, ne okungenzeka 99% wabantu uzothola ukugxekwa okhonza njengesosha definition capacious esiyicabangelayo.
I ezithakazelisayo kakhulu ukuthi umsebenzi womphakathi kwabantu abangaphezu kuka-, uthi, ayisithupha, lo umphakathi futhi beqonda nobunzima. Akubuzwa, ngisho abantu phezu 45 Ungasavele azibheke eshicilelwe kwegazi, njengoba lithi zonke izikhangiso on umsebenzi: "Akukhona emidala kuno 45". Uma umuntu iphelelwe inhlanhla, futhi yazithola emgwaqeni 46, futhi nezazi yokudala, kepha akanalutho ke ikusasa lakhe - noma umsebenzi angakahleleki, nofana ukubona ukuphila Dole. Futhi yini okufanele tshela of labo bachitha isikhathi esingamaphesenti emhlabathini, neminyaka izimakethe at 15? Ingabe bonke laba bantu ngokwabo kubhekwe imfucuza yezinto ezibonakalayo? Ngokusekelwe ezingenhla, singabona uphendula umbuzo othi obani le Fart ubudala, kanje: "Kuyinto lowo mkhulu kunezinhliziyo 45". Ingabe ufuna ukuhleka futhi ufuna ukukhala, kodwa uma ufunda izikhangiso, kuvela ukuthi lesi akusona ihlaya, okungenani eRussia.
Starperstvo - esimweni sengqondo
Ngaphezu kwalokho, yini okufanele ukusho. Umphakathi, noma kunalokho abantu abahlala kuwo, ube ukumelwa ekhethekile hhayi kuphela zokuguga, kodwa futhi intsha. Futhi abantu abasha abenza cha behave, njengoba kuyisiko kulowonyaka, kubhekwe Fart ubudala. Ngokwesibonelo, insizwa, uthi, eminyakeni engu-20 liyakulahla ontanga abaphuza, intuthu nangokuziphatha okonakele, nge Amathuba 99% kuyothiwa Fart ubudala.
Kodwa kukhona ubuhlakani. Uma isikhundla "indoda endala" - lena ubuzenzisi, yebo, isiteketiso kuyiqiniso, kodwa ngokuvamile akaqondi imvelo komgwaqo, okungukuthi bonke ngokuthi uhlobo olufanayo, ngokwalokho umuntu akushoyo, ikakhulukazi hhayi egxilile ugqozi lwakhe kwangaphakathi. Ngamafuphi nje, ungaceli kungani ecabanga kanjalo hhayi ngenye indlela. Manje kucace ukuthi umbuzo othi obani Fart ubudala, kunjalo elula hhayi njengoba kwakubonakala ekuqaleni. Ubudala kuleli cala - ke siyindlela ezijulile yesibili. Into esemqoka - ukuba zakwazi ukwenza lokho okulindelwe abanye.
"The young" umphakathi akafuni lutho mayelana nokuguga
Siqaphele kanjani ngobudlova yonke indawo eziphoqelelwe "sengqondo usukumele", "ukuphila impilo yokuzinakekela" nezinye izici khona sajabula kakhulu. Isintu ngokuyinhloko akafuni wathanda ukumbona ehlupheka, ukuba acabange ngobuhlungu zokuguga nezinye izinkathazo. Kungani? Kuthiwani uma labo manje emhlabathini, bayophila phakade, ngoba siyohlale okungenzeka. Ukwenza izithombe "Fart ubudala" owaba nalabo izici luyingxenye yemvelo. Ngokuvamile, ukuguga akuyona imfashini namuhla, kudingeka uhlale uyingane eside ngangokunokwenzeka. othandekayo pop izinkanyezi wethu ngisho angasho lutho ngobudala bayo begazi, nakuba akubona bonke. Kodwa ukuguga kungaba yizicukuthwane noma ezemidlalo. Nokho, imithi yenzani konke okusemandleni ukusula iminonjana isikhathi ebusweni nomzimba womuntu. Kulesi kukhona inkinga eyodwa kuphela: ukusebenza asiphumeleli njalo.
Ekugcineni, eyodwa kuphela: ukuguga akufanele esabe ngoba akunakugwemeka, futhi yilesi best.
Lapho ukuqunjelwa ngesikhathi sokukhulelwa ukuthi yenzeni
"Amahlosi Asian" - igama lolungakahleleki umnotho waseNingizimu Korea, Singapore, Hong Kong ne-Taiwan
Izitayela zangempela. Izinwele eziqoqiwe hhayi kuphela